Akụkọ - Nke a bụ ntuziaka nzọụkwụ dị na otu esi eji mgbatị ntutu, ntutu ntutu na ntutu na-agbazi ntutu.
Etu esi eji ntutu isi
Ọ bụrụ na ị na-eji mgbatị ntutu ọdịnala, lee ihe ị ga-eme.
1. Jidere akụkụ nke ntutu. Mepụta ngalaba nke ntutu iji gbanye ya. Nta-nta nke ngalaba, tighter the curl. Ibu nkebi ahụ, tọọtọ curl ahụ.
2. Ọnọdụ gị curling ígwè. Mepee mpempe ígwè gị, ma tinye ya na mgbọrọgwụ nke ntutu gị, tinye ntutu n'etiti etiti ahụ na oghere ahụ. Kpachara anya ka ị ghara ịgba onwe gị ọkụ.
3. Mechie ma slide. Jiri nwayọ mechie ihe nkedo ahụ, ma kpadaa ya na ngalaba nke ntutu ruo mgbe ọ dị na njedebe. Mechie mwekota ahụ n'ụzọ zuru ezu.
4. Ighikota, gbagọọ, gbaghaa. Mee ka eriri gị gbasaa na mgbọrọgwụ gị, kechie ogologo nke akụkụ ya gburugburu na usoro ahụ. Chere ihe dika nkeji iri rue iri na ise ka ntutu gi kpoo.
5. Mepee mwekota na hapụ. Jiri nwayọ mepee mpempe akwụkwọ ma wepụ ihe dị na ntutu gị, na-ekwe ka curl ị mepụtara kwụgidere kpamkpam. O siri ike, nri?
Ndụmọdụ Editor: Ọ bụrụ n ’ị na-ahọrọ ịdị mma karịa eke, chụọ ntutu gị na ihu gị. Iji mee nke a, kpoo ntutu gị ala na gburugburu curling gị na-aga n'ụzọ ntụgharị aka nri na ntụgharị aka nri na aka ekpe.
1. Jiri akwa igwe kwesiri ekwesi. Ndị na-edozi seramiiki dị mma maka ụdị ntutu dị mma maka ha ga - enyere aka mee ka ntutu dị nro.
2. Gbaa onye nhazi ahụ ntutu gị. Ugbu a ị kewapụrụ ntutu isi gị, ị nwere ike ibido ụzọ dị sentimita abụọ na ọkara. Bido na ntutu isi gi ma gharia uzo gi na ntutu gi rue mgbe iru iru isi gi. Iji dozie ntutu gị, were mpempe dị sentimita abụọ na ọkara (2.5 cm), gbanye ya n’ime, werezie ya were nwayọọ. Mgbe ahụ, gbaa ígwè dị larịị site na ntutu gị, malite na mgbọrọgwụ gị ma na-agagharị na njedebe ntutu gị. Mee nke a ruo mgbe ị gbanwere ntutu gị niile.
Mgbe ị na-agbazi ntutu gị, gbalịa na-agba naanị onye na-agbazi gị otu ntutu. Nke a bụ ihe kpatara esemokwu bụ isi, n'ihi na ka ị na-adọta ntutu gị, ọ ga-agbatị ngwa ngwa.
Ọ bụrụ n ’ntutu gị na-ama jijiji ka ị na-agbazi ya, nke a nwere ike ịpụta na ị kpachapụbeghị ya. Were onye na-afụ ụfụ ma kpoo ntutu gị kpamkpam tupu ị dozie ya ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike, jiri obere okpomọkụ ọnọdụ na gị ewepụghị ígwè. A haziri ntọala kachasị elu maka ndị ọkachamara salonlọ Mmanya, ọ nwere ike imebi ntutu gị ma ọ bụrụ na ịchebeghị ya nke ọma. Chọsie ike ịnọ n'etiti ogo 300 na 350.
Mgbe ụfọdụ ọ na-enye aka ịchụso mpempe akwụkwọ mbadamba gị mgbe ị gbusịrị. Were mbo wee bido na mgbọrọgwụ ntutu gị. Jiri nwayọ gbanye ntutu ahụ na ntutu gị ma ka ị na-eme ya, soro nkụkọ ahụ na ntanye gị. Nke a nwere ike inye aka mee ka ntutu gị ghara ịdị na-enweghị isi ka ị na-agbazi ya.
3. Tinye nwuo na ọbara. Ijide ntutu isi gị ma mepụta nchapụta, spritz ma ọ bụ tinye ọbara n'ime ntutu gị niile. Nke a ga - enyere aka ịbacha frizziness ahụ wee pụọ ma nye ntutu gị ntutu anwụ. I nwekwara ike ịgba ntutu gị na ntutu na-enye ọkụ na mgbọrọgwụ ka ọ ghara ịmịkọrọ ajị ụbọchị niile. 
Etu esi eji ntutu ntutu isi
Ọ bụrụ na ị na-eji ntutu na-agbazi ntutu, lee ihe ị ga-eme.
1. Were ntutu gị ekewa mpaghara anọ. Na nke ọ bụla, ịkwesịrị itinye ihe nchekwa ọkụ. Ọ bụ ezie na combs na-ekpo ọkụ anaghị emebi ntutu dị ka ihe ndozi, ọ kachasị mma ijide n'aka na echedoro ntutu nke ọma site na mbibi ọkụ nke nwere ike ime ka ọ kpọọ nkụ ma mebie. Tie mpaghara nke atọ site na nke gị na ya na arụ ọrụ, ma kewaa mpaghara ahụ na ọkara. Maka ịgbatị zuru oke, ntutu kwesịrị ịkpụkọta ya na mkpịsị ụkwụ ya. Weta akụkụ abụọ nke mpaghara mbụ ahụ ọnụ ozugbo ejiri nnukwu mkpụ na-agbacha ma ha abụọ.
2. Gbaa mpe ọkụ ọkụ dị nso na mgbọrọgwụ gị dịka ị nwere ike ịghara ịgba onwe gị ọkụ. Gbaa mbọ hụ naanị ime ọkara mpaghara. Ghaa ya ruo mgbe ị ruru iru ziri ezi ị chọrọ, ọ bụ ezie na oge abụọ-atọ na-arụ ọrụ kacha mma maka ogologo ntutu ma ọ bụghị nke dị larịị.
3. Tinyegharịa usoro niile na nkebi nke ọ bụla.
4. Mee ụfọdụ mgbe nlekọta. Maka nsonaazụ kachasị mma, nke na-adịte aka, tinye mmanụ, bọta, ma ọ bụ hapụ-abanye na ntutu ọhụrụ ahụ. A na-atụ aro mmanụ oliv, mmanụ castor, ma ọ bụ shea butter. Enwere ike ịme ntutu dị nkụ n'ihi okpomọkụ, yabụ cheta ịmịchaa mmiri ugboro abụọ kwa ụbọchị.